Ukutshiswa koNyaka omtsha 2017 - zokupheka ezithandayo ezinyathelo ngamanyathelo ngeesibini kunye neefoto. Yintoni entsha yokupheka i-Rootster ka-2017
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Kwitheyibhi yokuzonwabisa Unyaka omtsha
Ukutshiswa koNyaka omtsha 2017: zokupheka kwiikhosi zesibini kunye nemifanekiso nezithombe. Yintoni yokupheka entsha kunye nenomdla kwiNew New Year 2017 ye-Firecracker
Ukusondela koNyaka omtsha 2017, ixesha elininzi ixesha abendlukazi basebenzisa iincwadi zokupheka zentsapho kunye neendawo zokutya, ukufuna izitya ezimnandi nezangaphambili. Hayi, iziphumo zezinye zokupheka zikhohlise ukulindela kwabo - kunye netafile yeholide iyaba yintsingiselo. Ngesinye isidima ilahlekile, iholide ayibonakali injabulo njengoko ngaphambili, kwaye ukudumisa okungaqhelekanga kweendwendwe ziqala ukucaphukisa. Kodwa ungathini ukuvumela loo ntlekele? Yintoni ukupheka entsha kunye nokuthakazelisa, ukuze ungabikho mngcipheko kwixesha, iimveliso kunye nomoya wokuzonwabisa? Impendulo ilula - kufuneka ukhethe ngokucophelela kwaye uhlolisise iindlela zokupheka ezithatyathwe ngamanyathelo atshisayo okanye usebenzise ithuba lokukhethwa kwekhwalithi ephezulu, evivinywe kwaye evunyiwe. Lapha uza kufumana iindlela zokupheka ezona zilungileyo kunye nesithombe sesidlo sesidlo esitsha kuyo yonke into: ingulube, i-veal, idada, imvana, i-salmon, ivenkile yezilwanyana. Ngokungafani nealadi kunye nokutya, ukutshisa uMnyaka omtsha 2017 kukuphelisa isidlo sesidlo, ngoko ukutya kufuneka kube nesondlo kwaye kunomsoco, kodwa kungabi nendawo eninzi kwaye ibe nzima. Senze ukhetho lwesibini, ukuqwalasela zonke iimfuno zokutya kunye nokukhethwa kweso simboli se-Firecracker. Ngoko, ngeli xesha itheta lakho leNtsha elitsha liya kuba yimpumelelo kakhulu: inomdla, inqabileyo, yangaphambili!
Ukutshisa kwi-veal yoNyaka omtsha 2017. Yintoni entsha kunye nenomdla ukulungiselela - iresiphi ngesithombe
I-Rooster yoMlilo iyinyoni enobungqina bendalo kunye nobubele. Ukhetha ukutya kwendalo: ezinye imifuno yeengcambu, zonke iintlobo zemifuno, ezininzi zemifuno. Zonke ezi zixhobo zidibaniswa kwisitya esinye, ukudala ukutshisa okumnandi kuNyaka omtsha 2017. Yaye ungathatha nje ezinye zeemveliso ezixhamla i-Rooster kwaye zidibanise ngempumelelo nge-veal tender on the bone. Isitya esinomdla nesinqamleko siya kupholisa ngokukhawuleza kunye nokuzikhukhumeza komntu wonyaka ozayo, kwaye uyeke ukubonakalisa okubonakalayo okungekho phantsi kweendwendwe malunga neetalente zentlanzi ye-hostess.
Izithako ezifunekayo zokutshisa iresiphi yoNyaka omtsha 2017
i-veal chops kwithambo - 4 iipcs.
ii-oranges - ii-3.
i-anyanisi ebomvu - 1 pc.
rosemary - 4 amasebe
ioli yomnquma - 4 tbsp.
igalikhi - amazinyo ama-10
imbewu yefennel - 0.5 tbsp.
i-cumin - 2 tbsp.
ipapuri - iipunipoli ezi-2
coriander - 2 iipunipoon
Umyalelo wesinyathelo ngeyinyathelo kwiresiphi yokutshisa okumnandi kwiThebula leNtsha likaNyaka 2017
Ukulungiselela isithwathwa esishisayo soNyaka omtsha uqala nge-marinade yokulungiselela. Sika ii-oranges ezimbini kwiinqununu ezili-8. Sika ii-anyanisi zibe ngamacangci. Gcoba i-clove e-garlic kwisiqingatha. Beka izithako ezilungiselelwe kwisitya esikhulu kunye namasebe e-rosemary. Yongeza ioli yeoli.
Gxininisa izithako ze-marinade ngokugqibeleleyo. Gcoba kwi-veal, ululaze ngokulula kwaye uyishiye endaweni epholileyo kwieyure eziliqela. Okwangoku, jongana nezinye izithako. Ngokomzekelo, fry imbewu ye-coriander kwi-pan ecocekileyo.
Iimvumba ezomileyo kunye neziqholo (i-coriander, imbewu ye-fennel, i-cumin) ukuxuba kunye nenkqubo kwigrinder yekhofi okanye inkqubo yokutya. Yongeza ityuwa kunye nomhlaba we-paprika kumxube owenziwe ngumpu. Hlanganisa ngokupheleleyo isitya.
Emva kweeyure ezimbalwa, susa umkhumbu kwifriji. Thatha iinqununu zenyama kwi-marinade, ngokukhawulezileyo ngomile ngephepha leshidi. Ii-oranges ezisetyenziselwa ukuhlamba azinqatshelwe. Beka eceleni.
I-Veal iqhekeza ngeenkozi ngendlela enokuthi isiqwenga sonke sasihlanganiswe nge powder. Ngendlela efanayo, cwangcisa amaqhosha amathathu aseleyo. Isithambo singashiywa kwizinto ezivumba.
Iziqwenga zentsimbi ngobumnandi kwi-pan yokugcoba. Ubude kunye neqondo lokushisa kufuneka kube yinto yokuba inyama iphekwe ngaphandle, kodwa ihlala ingalungele ngaphakathi.
Beka i-chops kwi-tray yokubhaka, ufafaze i juisi yama-oranges asetyenziswa kwi-marinade. Ukupheka inyama ehovini kwi-180C ide ikulungele.
Faka umlenze emathanjeni kwiplani yokubonisa. Thela amaconsi ambalwa eoli yeoli (okwenzela i-shiny), uhobise nge-sprig ye-rosemary ne-orange tiles. Ncedisa isidlo esitsha esithakazelisayo se-Newcastle eshisayo!
Inkqubo yesibini yemveli yoNyaka omtsha yitshisa "iDuck in Oranges"
Ama-horoscopes aseMpumalanga acetyiswa ngamandla ukuba aphumelele uNyaka omtsha 2017 ngaphandle kwenyama yenkukhu kwimenyu. Isinyathelo esinjalo esingenangqiqo siya kubandezela i-Fiery Cock. Enye into yidada, i-goose okanye i-turkey. Iinyoni ezinamanzi, eziphekwe ngamanunci amnandi kunye omuncu ngaphantsi kwe-citrus sauce, ziya kuhobisa itafile yonyaka omtsha kwaye zibangele iindwendwe zibe ngumdla onobukrakra kuphela ngesiphunga sawo. Nangona iindwendwe ezininzi zibeka engozini ukuthatha isidumbu esinzima kunye nesinyama, inqubo yokuyilungisa kulula ngakumbi kunokuba ibonakale ekuqalekeni. Kwanele ukuthabatha izithako zekhwalithi yesibini kwisidlo soNyaka omtsha kwaye ulandele zonke iinqununu zenyathelo lendabuko "Amadada e-Oranges".
Izithako eziyimfuneko kwikhosi yesibini esishisayo yoNyaka omtsha 2017
Isidumbu sesidumbu - 2 kg.
i-bulb - 1 pc.
ingcambu ye-celery - i-0,5 ipcs.
ii-oranges ezinkulu-5 iipcs.
iinqathi - 1 pc.
ityuwa kunye nepepper
iviniga ye-apula - 2 tbsp.
i-orange - ii-2.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo yeresiphi yekhosi yesibini esishisayo yoNyaka omtsha 2017
Phonsa yonke isidumbu sedoki kakuhle, uze uyomile ngamatyulo ephepha. Gubha intaka ngaphandle nangaphakathi kunye namakhambi kunye netyuwa encinci. Shiya idada efrijini ngeeyure ezingama-12 ukuya kwe-18.
Ekupheleni kwexesha, thabatha idada, unqume intamo namaphiko. Phezulu komhlaba wonke wesidumbu sophula isikhumba ngefoloko eninzi.
Faka intaka kwisitya, usekwe kwipopi yamanzi. Emanzini aphantsi i-bulb yonke, i-carrot, isiqingatha se-celery. Ukuthumba idada kwindawo yokuhlambela amanzi ngaphantsi kwe-foil ubuncinane imizuzu engama-30.
Ukuze wenze i-sauce, krazula ii-oranges ezimbini, cima i juice. I-Sugar kunye nomlinganiselo omncinci wamanzi opheka ngotshani ophantsi uze uchithe. Yongeza i-aple cider iviniga, i-pepper yomhlaba, i-juice ye-orange kunye nesitya. Qhubeka upheka i-sauce uze udibene.
Idada elungiselelwe elele kwiphepha lokubhaka, ngaphakathi lizalise le ntaka ngeesilwanyana ze-orange. Ukubopha umgca we-paws uze uphononise iiphelo ngefestile, ukuze ungatshisi. Dlulisa isidumbu ngeoli elincinci ngejisi lemon. Yongeza umncinci wamanzi okanye umhluzi ukuya ngasezantsi.
Ukushisa i-ovini ukuya kwi-180 ° C. Bhaka udada malunga nemizuzu engama-25-30 kwicala ngalinye. Iyure ukususela kwiyure ukuhambisa umhluzi kwi-pan. Iinyoni eziphekwe ngokukhawuleza zityhala i-sauce kwaye zibhaka ezinye i-10 min kwi-200C.
Idoki edikiweyo ngama-oranges, ususe ehovini, shiya kwikhasi lokubhaka imizuzu eyi-10-15, uze usebenze ngoNyaka omtsha njengenkxaso yesibini yemveli.
Isitya esinyayo esishushu se-ngulube yoNyaka omtsha kwi-multivariate: iresiphi yevidiyo
I-Roulette kwi-multivarquet isitya seentsapho zendabuko, esithandwa kakhulu phakathi kwabendlukazi. Ukuze uzilungiselele udinga inani elincinci lemveliso, ixesha kunye nomzamo. Yaye ukuba iresiphi iphuculwe kancinci kwaye iyancediswa kunye nezithako ezimnandi, isitya esinyayo esicayo se-ngulube siya kudibanisa ngokufanelekileyo kwiTable yonyaka. Ekubeni inyama iphekwe kwisixhobo akukho ngakumbi ngakumbi kunokuba ku-ovini, akufanele ukhathazeke ngesilinganiso esaneleyo sokugcoba. Kwaye endaweni yokuhlala ungapheli kwisitofu, yenza unwele, wenze-up okanye ubukele iTV ye-New Year's TV. Lungiselela isidlo esitshisiweyo sonyaka oMtsha kwi-multivark kwi-recipe yevidiyo-kwaye ujabulele inkqubo elula kunye nomphumo ongafanelanga.
Ukutshisa ukusuka kumthamo ukuya kutsho kuNyaka omtsha 2017 we-Firecracker - iresiphi yenyathelo ngesinyathelo kunye nesithombe
IWundlu ayilona luvavanyo olulula kumfazi onamava onamava. Kodwa ukuze ukondle intsapho yakho ngokutya okuninzi kakhulu kuMnyaka omtsha, unokuhlangabezana nayo nayiphi na ubunzima. Ukuze ugweme uhlobo olunefuthe lenyama, kungcono ukhethe ukhula lweebhanki "ubisi" olukhula. Ukuba isilwanyana sasikhulile, kufanelekile ukususa onke amanqatha kunye nokuhlambulula i-pulp kumxube we-zira, i-cumin, i-hops-suneli. Kwaye ukuze inyama eshisayo yegusha yoNyaka omtsha 2017 ibe yinto ethambileyo kwaye ilungele inyama, inyama ayifanele igalelwe. Ukuba ukugqithwa kuvela ngaphakathi ngaphakathi kwerusi yepinki, imvana ilungile.
Izithako ezifunekayo zemvana ezitshisayo kunyaka omtsha 2017
inkunzi yegusha - 1 kg.
iklabishi ebomvu - 0,5 pcs.
iipulo ezithandekayo nezimuncu - ii-2.
i-anyanisi emhlophe - ama-3 ama-pcs.
ama-blackberries okanye i-currants-100 g
iwayini elibomvu - 2 tbsp.
umgubo - 2 tbsp.
i-cream gesi - 200 g
ioli yohlaza - 100 ml
Umyalelo wenyathelo-nge-nyathelo lokupheka ukupheka ngoNyaka omtsha 2017 we-Firecracker
Qala ukupheka umnikelo wempuphu oshisayo woNyaka omtsha 2017 ukusuka ekulungiseleleni umquba wemifuno. Coca ii-bulbhu ezimhlophe uze uzicheke ngeesandi eziqingatha.
Kwisitampu esinzulu, gcoba ubuninzi be-anyanisi, uthele inxalenye yeoli yezityalo. Yongeza kwisitya 1 tbsp. iwayini kunye neziqholo zokunambitha.
I-klabishi ebomvu, yifake epanini. Emva koko thumela iipulole ezipunyiweyo kunye ezinomsoco ezicocekileyo, ezimnandi kunye namabhereberries. Shiya imifuno yomhla o-1 wokuhlamba.
Kwinqanawa eyahlukileyo, lungise inhlama ye-patties eyosiweyo. Hlanganisa umgubo, iqanda, amanzi, i-oyile yemifino, ityuwa kunye neengqayi zeswekile. Inhlama kufuneka ibe yindoda kunye ne-elastic.
Hlanganisa i-cream cream nge-greenery. Ziyimfama ezimbalwa iipeyi ezincinci. Bafake kwioli yezolimo kuze kube yile.
Gubungela imvana ityuwa kunye neziqholo. Fry inyama inyama ngomxube weoyile yemifuno kunye newayini. Gcoba iklabishi ngobushushu obuncinane kuze kube yimizuzu ephekwe.
Ukuphelisa inyama encinciweyo ekhutshiwe kwi-pan kwaye uthathe iinqununu 1-2 cm.
Beka umkhombe weemifuno ezityiweyo kwiiplate. Okuphezulu kunye ne-patties encinci kunye ne-cream kisi kunye neesahlulo ezimbalwa ze-mutton kude. Ncedisa isitya esitshisayo kwi-2017 Firecracker nge-sauce yesardard.
Ukutshisa okungaqhelekanga kwi-salmon kuMnyaka omtsha we-2017 Cock - iresiphi kunye nesithombe
Ukuba ufuna ukungenisa kwitafile yonyaka omtsha into ehlambulukileyo, enonkqisayo, kodwa engeyona nto encinci, ngokuqinisekileyo uza kunenzuzo kwiintlanzi zasebukhosini zama-Russian-salmon. I-steak ye-salmon yesithenda, edikiweyo ngeoli ecocekileyo eneemithi ezivumbabisayo - "ukugqwesa" ngokwenene phakathi kokutya kwazo zonke izidlo. Isitya esingenasidlo sokutya seentlanzi ngoNyaka omtsha 2017 siya kushiya iindwendwe zivuyiswe kwaye zithokoze i-Rooster kunye nama-aromas aqhubekayo weetrob.
i-steak ye-salmon - i-6 pcs.
iwayini elimhlophe elomileyo - 150 ml
ioli yomnquma - iipuniwe eziyi-6.
Imiyalelo yesinyathelo-nge-nyathelo yetshephu eshushu etafileni ngokuhlonipha uNyaka omtsha 2017
I-Steer steaks ihlambulule ngokucophelela ngamanzi abandayo. Yomisa intlanzi ngeepilisi zamaphepha, ityuwa kunye netyuwa kunye neziqholo.
Ebushushu obuphezulu, ukushisa i-pan yokucoca ngeoli yeoli.
Beka ii-steaks kwioli. Fry 1 iminithi yokuqala yokububula kunye nemizuzwana engu-45 kwicala lesibini. Qaphela ukuba ungaba nexesha lokwenza i-crried fried.
Phala iwayini elimhlophe kwi-pan yokucoca. Vala isiqhekeza ngokuqinileyo uze udibanise intlanzi emlilweni omncinci kumitha emi-5-6. Ngale ndlela yokucubungula, i-salum steak iya kuba yinkcenkceshe enkulu kwaye ithambile.
Ukuloba intlanzi sele ifikelele ukulungelelana kwayo, shiya ii-steaks kwi-pan yokucima enye imizuzu emi-3-5, ukususa okokuqala emlilweni. Emva koko ubeke isidlo sonyaka esitsha esibushushu sonyaka omtsha kwisitya esicatyebileyo, uzalise i-sauce yakho oyithandayo kunye nemifuno emitsha.
Isitya esitshisa sezonka zokuloba kwiNew New Year 2017 - iresiphi elula neyolisayo kunye nesithombe
I-Pasta eneemifuno kunye neentlanzi zaselwandle zibhekwa njengeyona nto elula, ehlekayo kwaye, eqinisweni, isitya esitshisa ngokukhawuleza soNyaka onyaka-2017. Ukufuna ukunqanda ama-shrimps, i-mussels kunye nezinye izidlo ezincinci ziyimfuneko embalwa. Kwaye ukupheka kwe-spaghetti eyenziwe yinto engekho nto. Kodwa ukuze isitya sibe sigqibelele kuzo zonke izicwangciso, kufuneka usebenze kanzima kwi-sauce. Ebusika, ukhetho oluthe tye luya kuba ngumntu ococekileyo onxibe kunye noshizi, iziqholo okanye imifuno.
Izithako eziyimfuneko yokufumana iresiphi elula neyolisayo kwitheyibhile yokutya yeNyaka omtsha 2017
umgubo - 1,5 tbsp.
amaqanda enkukhu - ama-3 ama-pcs.
utamatisi - ii-3.
imifuno ka-parsley - i-1 ibhamvu
i-mussels - iingcezu ezili-10.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo ukupheka okulula kunye nokutshisa okumnandi kuMnyaka omtsha 2017
Qala ukupheka isitya seNtshonalanga eshisayo sonyaka omtsha kunye nokulungiswa kwe-pasta. Hlanganisa umgubo kunye namaqanda, uxoke umxube, inhlama ye-elastic.
Phuma i-pasta inhlama ibe yincinci, ibe yindawo. Ukusebenzisa umatshini okhethekileyo okanye umkhwa obukhali, nqunqa iphepha lokuhlama.
Kwisitya esinokutshisa kwi-oli yemifuno, i-garlic gazinga kunye nama-mussels aphekwe ngaphambili.
Kwinqanawa efanayo kwakubeka isikwashi esisikiweyo kunye neetamatato eziqoshiwe. Zenze zonke ndawonye imizuzu emibini.
Thela i-pasta emanzini anamanzi kuze kube yimizuzu ephekwe. Hlanganisa umxube kwipani yokucoca kunye notyuwa lolwandle kunye ne-Origano eyomileyo.
Beka ipasta ephekwe kwiphaka yokutshiza. Hlanganisa zonke izithako. Yongeza ibhotela encinci ukuze unciphise intle.
Faka unxweme kumgca onzulu. Phezulu nge-sauce kunye nemifuno kunye nama-mussels.
Khonza isitya esilula nesincobile eshushu esityathwayo sezilwanyana zaselwandle kwiTable yonyaka omtsha eshushu, kunye neqhekeza lemon kunye ne-sprig ye-basil.
Esinye isidlo esitshisayo sonyaka omtsha 2017: zokupheka kunye nemifanekiso kunye nevidiyo
I-scicy roll roll kunye nokuzaliswa okumnandi kwama-walnuts yinye isidlo esitshisayo sonyaka onyaka-2017. Lungiselela itafile yonyaka omtsha lo wokutya okumnandi kunye nesigqirha kunye nemifanekiso kunye namavidiyo ukuphepha iimpazamo zengozi kwaye ufumane umphumo ongapheliyo. Ukutshiswa koNyaka omtsha 2017 kuyindawo ebalulekileyo yesidlo somkhosi. Abavakalisi bahlala bekulangazelela ngokukodwa iklasi yesibili ukuba banandiphe umdlalo ocolileyo kwaye baxabise izakhono zokucwangcisa zomncedisi. Ukusuka kwenyama, intlanzi, ivenkile zasemanzini - nayiphi na ishushu kwitafile yonyaka omtsha kufuneka ifane nomxholo weeholide kwaye uhlangabezane nezikhetho ze-Firecracker. Ukusebenzisa iqoqo lethu leziteyibhile kunye nekiso kunye nemifanekiso, ngokuqinisekileyo uya kufumana ukuhluka kwempembelelo "yesithsaba".
Unyaka omtsha omtsha wokutya 1
Uluhlu loNyaka olutsha olutsha lweNew Snack 2
I-salmon ye-Festive ene-lime
Iimali zembhiyozo zokuqala zeeGoli zonyaka oNtsha zika-2015
Iimpawu zokunceda iinwele ezomileyo kunye nokulahleka kweenwele
Indlela yokuvula ivenkile uze uqale ishishini lakho?
Impembelelo kwimpilo yezorhwebo zasehlotyeni ngaphandle kwesixeko
Ubude bezesondo zesondo
Iphupha lokutshata ngenxa yothando
Ingubo kunye neenaliti zokudibanisa intombazana iminyaka engama-1-2 kunye neengubo zamabhinqa
Ukugqoka ngelokuhlwa ngesiSpain
Unyango lwezonyango zentliziyo yezilwanyana zonyango
Ungakhetha njani umfanekiso ochanekileyo?